तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!!
तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !यो पनि पढ्नुस
सामान्यतया सर्प देखेपछि मानिसहरु डराउँछन्।तर,हालै भारतमा एक अनौठो खालको सर्प देखिएपछि हेर्ने मानिसहरुको भीड लागेको छ।भारतको कर्नाट कस्थित होलमाकी गाउँमा अचम्मको कोब्रा जातिको सर्प फेला परेको हो । जसको टाउँकोमा सुनौलो रंगको प्रकाश चम्किन्थ्यो । सर्पको शीʼरमा प्रकाश चम्किएपछि नाग देʼवता भन्दै सʼर्पको पूजाआजा गर्ने मानिसको भीड लागेको थियो ।समाचारका अनुसार होलमाकी गाउँका एक स्थानीयको कुकुर खेतमा गएर अचानक भुक्न थाल्यो। त्यो देखेर मानिसहरु त्यहाँ पुगे । त्यहाँ पुग्नेवित्तिकै मानिसहरुले कोब्रा जातको अनौठो सर्प देखे । तर, सर्प विशेषज्ञका अनुसार त्यहाँ कुनै चमत्कारी नभएको बताʼएका छन् । ********* भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *******
१. तपाईसँग निश्चित समय छ
तपाईसँग निश्चित समय छ, जो तपाई आफ्नै लागि सदुपायोग गर्नुहोस् । अनावश्यक कुरामा अल्भिmएर समय बर्वाद नगर्नुहोस् ।
३. परिवर्तनको आवश्यक्ता
पछिल्लो ३३ बर्षमा मैले स्वंमलाई ऐनामा हेर्दै आएँ । तर, मैले हरेक दिन स्वंमलाई सोधे कि यदि आज मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भने मे के गर्न चाहन्छु ? तर, कहिले मैले यसको जबाफ सुनिन । म जान्दछु कि मैले बद्लिनुपर्छ ।
४. त्यही गर्नुहोस्, जसको मूल्य छ
मर्ने समयमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेर मर्नुमा मलाई कुनै मतलब छैन । हरेक रात ओछ्यानमा गएर राती यहि सोच्छु कि, आज पुरा दिन मैले नयाँ के गरे ? यसले मेरो जीवनमा के महत्व राख्छ ?
५. सोंच सफा राख्नुहोस्
तपाईले धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ ताकि तपाईको सोंच स्वच्छ बनिरहोस् । सोंचलाई सफा र सरल बनाउनु पर्छ । यसका लागि मिहेनत गर्नुपर्छ । मिहेनतबाट मिल्ने यस्तो सोच परिणामका लागि ठूलो मूल्य राख्छ । किनभने यो पाएर तपाई पहाडलाई पनि हल्लाउन सक्नुहुनेछ ।
७. विश्वास गर्नुहोस्
तपाईले कुनैपनि कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ । तपाईको साहस, संभावना, भाग्य, जीवन, उर्जा वा कर्म जसमा पनि विश्वास गर्नुहोस् । यो दृष्टिकोणले तपाईलाई कहिल्यै गिर्न दिनेछैन ।
केहि समयसम्म मनपर्दो बिचार र नयाँ प्रौद्योगिकको खोज गरेपछि एक कम्पनीलाई परिवर्तन गर्न बर्षौ समय लाग्छ । यो सबै गर्नका लागि एकदमै अनुशासनको आवश्यक्ता छ ।
कहिले कहिले जिन्दगीले तपाईको टाउकोमा इंटा पनि बजार्न सक्छ । तर, यस्तोमा तपाईको विश्वास हराउनु हुँदैन ।
१०. उत्पादनको डिजाइन
कुनै विशेष समुदायलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन डिजाइन गर्न एकदमै मुश्किल हुन्छ । किनभने धेरैलाई थाहा छैन कि उनीहरु के चाहन्छन, जबसम्म उनीहरुलाई तपाईले देखाउनु हुनेछैन ।
११. जब कुनै समस्या आउँछ
जब कुनै समस्या आउनसाथ मानिसहरु सोध्छन् कि, यो के भयो ? जबकी सहासी युवा सोध्छन् कि यससँग हामीले कसरी जुध्न सक्छौ ?१२. त्यही काम गर्नुहोस् जहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ
१३. गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्
गुणवत्तामा विश्वास गर्नुहोस् । हामीले अलग बाटो रोज्यौं । हामीलाई विश्वास छ कि, यदि उपभोक्तालाई राम्रो एवं गुणस्तरिय उत्पादन दियौ भने उसले आफ्नो पर्स खोलिरहन्छ ।